फिफा विश्वकप छनोट : नेपाल र म्यान्मा भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ? - नेपालबहस
फिफा विश्वकप छनोट : नेपाल र म्यान्मा भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?
२१ कार्तिक, काठमाडौं । कतारमा सन् २०२२ मा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबल छनोटमा आधा दर्जन खेल खेलिसकेको नेपालले आज म्यान्मासँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ ।
Previous articleटेक्सासमा महिलाको हत्यामा दोषी ठहरिएकालाई मृत्युदण्ड
Next articleलोप हुँदै गन्दर्भको पेशा